Gurukota rezveKushanya Rinoshanyira Nzvimbo Dzekushanya Diki muSouth Mahé
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Seychelles Kuputsa Nhau » Gurukota rezveKushanya Rinoshanyira Nzvimbo Dzekushanya Diki muSouth Mahé
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • nhau • Kuvakazve • Seychelles Kuputsa Nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Akasiyana Nhau
Diki Tourism Tourism Nzvimbo muSouth Mahé
Gurukota rinoona nezvekunze uye Tourism, Mumiriri Sylvestre Radegonde akatangazve rwendo rwake rwekushanyira zviri pamutemo vashanyi veindasitiri yekushanya neChishanu chapfuura, Chikunguru 23, kutanga paAnse Royale. Izvi zvaisanganisira kumira panzvimbo pfumbamwe muSouth Mahé nekwanisi yemakamuri asingasvike makumi maviri.
Gurukota rezvekushanyirwa, Radegonde akataura kuti anokurudzirwa nenhamba yepamusoro yekugara munzvimbo diki dzakashanyirwa.
Vazhinji vemahotera vakabvuma kuti vakabudirira kutenderedza zana muzana kugara mumwedzi yapfuura.
Kugoverwa kwevashanyi kunzvimbo yekuenda kunoratidzika kunge kuri pakati nepakati nepadiki nenzvimbo dzakakura.
Kushanya uku kwaive mukana wakanakira Gurukota Radegonde uye Munyori Mukuru Wekushanya (PS), Mai Sherin Francis kuti vazvionere-vo zvigadzirwa zvinopihwa vashanyi nenzvimbo yavari kuenda.
Gurukota Radegonde vakataura kuti vanokurudzirwa nenhamba yepamusoro yekugara munzvimbo diki dzakashanyirwa.
“Kushanya uku kwakabereka zvibereko zvikuru mukusimbisa kuti mwero wekugara unogutsa zvikuru kune edu madiki madiki, vazhinji vemahotera vachibvuma kuti vakawana nzvimbo inosvika zana muzana mumwedzi yapfuura. Zvinotaridza kuti pane kugoverwa kwakaringana kwevashanyi kwavanenge vachienda, zvichipesana nemafungiro ekuti vashanyi vedu vari kufarira nzvimbo huru, ”vakadaro Gurukota Radegonde.
Akataura kuti aifara kunge akakwanisa kusimbisa kuzvipira kwedhipatimendi rekushanya kune vese vanyowani pachavo.
"Bazi rakagadzirira kubatsira vanobatsirana kuti vagadzirise zvigadzirwa zvavo uye kuendesa masevhisi pamwe nekupa rubatsiro pakuonekwa kwavo uye kushambadzira kwavo."
Kune rake divi, PS Francis akatsanangura kukosha kwekushanya kuhofisi yake zvinoenderana nezvakakosha zvakapihwa nebazi rake muna Chikumi gore rino.